အတန်းထဲ ရောက်သွားတဲ့…မြန်မာ့ တရားစီရင်ရေး | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeအတန်းထဲ ရောက်သွားတဲ့…မြန်မာ့ တရားစီရင်ရေး
အတန်းထဲ ရောက်သွားတဲ့…မြန်မာ့ တရားစီရင်ရေး
July 29, 2017 drkokogyi
အတန်းထဲ ရောက်သွားတဲ့…မြန်မာ့ တရားစီရင်ရေး………
စာသင်တဲ့အမှု…မရ ရအောင် အမှုဖွင့်ပြီး…အချု ပ်ထဲ ဇွတ်ထည့်ထားတယ်……
ဝရမ်းပြေး ဘုန်းကြီးက……လူစုလူဝေးနဲ့…….ဆူပူဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာကို….လွှတ်တော် အမတ်ကပါ…..အမိန့်နာခံ…လိုက်နာ….တယ်..
မျိုးညစ်ပါတီဥက္ကဌ တယောက်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေးဟောင်း(ဖာခေါင်း) က
အွန်လိုင်းမှာ….လူမျိုးရေး/ဘာသာရေး အထိကရုန်းဖြစ်အောင်ဖွ….အရေးယူမဲ့ သူမရှိ….
ကျော်မင်းဆွေလို..မီဒီယာသမားရဲ့ အမှုကလဲ…ရာဇဝတ်သားတွေထက် ပိုအခြေအနေဆိုးနေ
လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ အကာအကွယ်ကို တရားဝင်ယူထား…လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ အတူ ဓာတ်ပုံ တွေတွဲရိုက်…လက်နက်တွေ ကိုင်ပြနေတဲ့ သူ(ဘုန်းကြီး)တွေကိုတော့ အရေးမယူ….
လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ စကားပြောခဲ့တဲ့ မီဒီယာသမားတွေက ဖမ်းအချု ပ်ခံနေရ….
အလှူ အတန်း လုပ်တာကို သူညီပေးခဲ့ သူတွေက…အမှုဖွင့်ခံရလို့ အာမခံနဲ့ နေ နေကြရ
မတော်တရော်တွေ ဖြစ်နေတာက ရေးပြလို့ ဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူး…..
NLD အစိုးရ လက်ထက်ရောက်မှ……မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ရေးက
ဖာတန်းထဲ လုံးလုံး ရောက်သွားတော့တာဘဲ…..
← This Pi-hen isaspecial breed of Myanmar Military Animal Farm
ဟုတ်တယ်ဒကာ မြန်မာနိုင်ငံသည်ဗုဒ္ဓနိုင်ငံဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်သာပင် လက်ညှိုးထိုးမလွဲစေတီတွေရှိနေလည်း သာသနာကွယ်မှာကြောက်နေရတယ် →